Cthulhu ဟုအမည်ပေးထားတဲ့ ရှေးဟောင်း ပင်လယ်သတ္တဝါ ရုပ်ကြွင်းအကြောင်း - Knowledgeworms
Cthulhu ဟုအမည်ပေးထားတဲ့ ရှေးဟောင်း ပင်လယ်သတ္တဝါ ရုပ်ကြွင်းအကြောင်း
October 3, 2021 October 3, 2021 AuroraLeaveaComment on Cthulhu ဟုအမည်ပေးထားတဲ့ ရှေးဟောင်း ပင်လယ်သတ္တဝါ ရုပ်ကြွင်းအကြောင်း
သုတေသီတွေက သည်းထိတ်ရင်ဖို စာရေးဆရာ H.P. Lovecraft ရဲ့ Cthulhu လို့ အမည်ရတဲ့ ရေဘဝဲ၊ ကင်းမွန်တွေလို စုပ်တံတွေပါတဲ့ သတ္တဝါ နဲ့ ဆင်တူသော ခေတ်သစ် Sea cucumbers ​ပင်လယ်မျှော့ မျိုးစိတ်တွေရဲ့ ရှေးဟောင်း ဘိုးဘေး မျိုးစိတ်တစ်ခုကို တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။
ယူကေ နဲ့ အမေရိကန်က သုတေသီတွေဟာ H.P. Lovecraft ရဲ့ ထိတ်လန့်ဖွယ် စိတ်ကူးယဥ် ဇာတ်လမ်းတွေထဲက ကြီးမြတ်လှတဲ့ ကြီးမားတဲ့ စုပ်တံလက်ချောင်းတွေပါတဲ့ သတ္တဝါတွေနဲ့ ပုံစံတူလှတဲ့ ခေတ်သစ် Sea cucumbers ပင်လယ်မျှော့ မျိုးစိတ်တွေရဲ့ ရှေးဟောင်းဘိုးဘေးရုပ်ကြွင်းတစ်ခုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိကြပါတယ်။
သူတို့က အဆိုပါ မျိုးစိတ်သစ်ကို Sollasina cthulhu ဟု ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။
ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်တွေဟာ အဆိုပါ နှစ်သန်းပေါင်း ၄၃၀ သက်တမ်းရှိကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းကို 3D ကွန်ပျူတာပြန်လည် တည်ဆောက်မှုကို အသုံးပြုပြီး သူတို့ရဲ့ မျိုးစိတ်တွေကို သိပ္ပံနည်းကျ အသစ်အဆန်းများနဲ့ ခွဲခြား သတ်မှတ် စေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အကျယ် ၁.၁ လက်မ( ၃ စင်တီမီတာ) သာရှိတဲ့ သူတို့ရဲ့ စုပ်တံ မျက်နှာပြင်တွေက ပင်လယ်ပြင်တစ်လျှောက် လည့်ပတ်သွားလာပြီး အစား အစာတွေကို ဖမ်းယူစားသောက်နေတာဟာ တခြား ပင်လယ် သတ္တဝါငယ်များစွာ အတွက် အလွန်တရာမှ အံ့သြဖွယ်ဖြစ်နေစေလိမ့်မည် ဟု ဆိုပါတယ်။
ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းပုံစံ ရဲ့ အဆင့်တစ်ခုစီတွင် ရိုက်ကူးထားသော ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ စီစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး ဓာတ်ပုံတွေကို ရုပ်ကြွင်းပုံစံ တည်ဆောက်ရာမှာ ပြန်လည် အသုံးပြု လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီ 3D ပုံစံ ပြန်လည်တည်ဆောင်ထားတာဟာ သုတေသီတွေကို Sollasina cthulhu ​တွေရဲ့ အစာကျွေးဖို့ နဲ့ သွားလာဖို့အတွက် အသုံးပြုတယ်ဟု ယူဆရတဲ့ အတွင်းပိုင်း လက်စွပ်ပုံစံ အရည်သွေးကြောစနစ်ကို မြင်တွေ့ရစေပါတယ်။
Sollasina cthulhu ဟာ ophiocistioids ဟုခေါ်သော မျိုးသုဉ်းသွားတဲ့ အုပ်စုထဲ ပါဝင်နေတယ် ” ဟု Oxford တက္ကသိုလ် သမိုင်း သုတေ သန ဒုတိယအကြီးအကဲ ၊ ဦးဆောင်စာရေးသူ Dr. Imran Rahman ကဆိုပါတယ်။
သုတေသီများက Sollasina ကို အမျိုးအစားခွဲခြားဖို့ မသေချာ ဖြစ်နေကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် သူတို့က Sea cucumbers မျိုးစိတ် ရုပ်ကြွင်းတွေ နဲ့ သံပခြုပ် မျိုးစိတ် ရုပ်ကြွင်းတွေအကြား ကွဲပြားခြားနားချက်တွေကို ကွန်ပျူ တာဖြင့် ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။
Sollasina ကို Sea cucumbers (ပင်လယ်မျော့) နှင့် သံပခြုပ် တွေနဲ့ နီးကပ်မှု ရှိမရှိ လေ့လာခဲ့တယ် ဟု သုတေသန ပူးတွဲရေးသားသူ Dr. Jeffrey Thompson ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ ရလဒ်က ဒါဟာ ရှေးခေတ် Sea cucumbers (ပင်လယ်မျော့) မျိုးစိတ် ကို ညွှန်ပြနေတယ်ဟု ဆိုပါတယ်။
ကွန်ပျူတာဖြင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားတဲ့ ရလဒ်တွေက ကျွန်ုပ်တို့ကို အဖွဲ့ရဲ့ အစောပိုင်း ဆင့်ကဲဖြစ်စဥ် အတွင်းမှာ တွေ့ရတဲ့ ပြောင်းလဲမှု​တွေကို နားလည်ဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ ဆင့်ကဲဖြစ်စဥ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ယနေ့တွေ့ရတဲ့ ပက်ကျိ ပုံစံလိုမျိုး ဖြစ်လာတယ် ဟု ဆိုပါတယ်။
အမေရိကန် စစ်တပ်များကို အာရှ အလယ်ပိုင်းရှိ ရုရှား အခြေစိုက်စခန်းများတွင် လက်ခံဖို့ ပူတင်မှ ကမ်းလှမ်းခဲ့ဖွယ်ရှိ
Solar Farm ခေါ် ဆိုလာစိုက်ခင်းကြီးတွေ အလုပ်လုပ်ပုံနှင့် ၎င်းနှင့် ဆက်စပ်နေသော အကြောင်းအရာများ
ချွေးမထွက်တဲ့ ဝက်များ၏ အပူချိန် ထိန်းသိမ်းပုံ အကြောင်း
June 20, 2022 June 20, 2022 Aurora
ပုစဉ်းရင်ကွဲ များ အကြောင်း သိကောင်းစရာ